Mogadishu Journal » 2022 » January » 17
//January 17, 2022
Afhayeenka Xukuumadda Mudane Maxamed Ibraahim Macalimuu ayaa dhaawaciisa loo qaaday dalka dibaddiisa, waxaana ku sagootiyey Garoonka Aaden Cadde xubno ka tirsan Golaha Wasiirrada, Mas’uuliyiinta Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha iyo saxafiyiin Soomaaliyeed. Ra’iisul Wasaaraha...
Madaxweynaha Dowlad goboleedla Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka Amniga Dowladda Hirshabeelle. Shirka oo ay ka qeybgaleen Gudoomiyaha Gobolka Shabeellaha Dhexe, Taliyaha Guutada 3aad qeybta 27aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, iyo...
Baarlamaanka UK ayaa Talaadada beri ah lagu wadaa in muddo kooban uu dhageysto dood ku saabsan madax-banaannida Somaliland, taas oo uu usoo gudbin doono xildhibaan Gavin Williamson oo laga soo doorto Koonfurta Staffordshire. Doodda oo ah mid uu mudanaha ku soo gabagabeyn doono...
Houthi rebel group claims responsibility for the attack, says it launched a military operation ‘deep in the UAE’. Published On 17 Jan 202217 Jan 2022 Three people were killed and six others wounded when three oil tankers exploded in Abu Dhabi in a suspected drone attack claimed...
Janeraal Abuukar Warsame Xuud oo si weyn uga soo horjeeday maamulka Hirshabelle uu hogaamiyo Madaxweyne Cali Guudlaawe , ayaa shaaca ka qaaday in uu tanaasul sameenayo uuna wadahadal la galayo Maamulka Cali Guudlaawe hogaamiyo. Taliyaha ciidanka dhulka ee milatariga Soomaaliya...
Taliyaha Ciidanka dhulka ee milatariga Soomaaliyeed, General Maxamed Tahliil Biixi iyo wafdi Saraakiil ah oo uu hogaaminayo ayaa maanta gaaray Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan. Wefdiga uu hogaaminayay taliyaha ciidanka dhulka ee milatariga dalka waxaa garoonka...
Raisul Wasaare Rooble oo caawa Isbitaalka ku booqday dhaawaca Macalimu (Sawirro)
Ra’iisul Wasaaraha Somalia Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa caawa Isbitaalka ku booqday Afhayeenka Xukuumadda Mudane Maxamed Ibraahim Macallimu oo ku dhaawacmay qarax maanta lala beegsaday. Ra’iisul Wasaaraha ayaa la sheekeystay Macallimu oo xaaladdiisu soo hagaageyso, waxa uuna...